Akavazhi Kahara Katurazvo. Download Download
Catalogue YeGeared Motors
Tsvaga idhizagi re helical gear motors inline shaft mhando
R akateedzera mota uye gearbox kuverenga pdf
Uyu mutungamiri kune gearbox uye mota sarudzo kune avo vasingazive zvizere nesarudzo. mabhokisi makuru egiya nemota zvakagadzirwa nesimbi yakagadzirwa, aluminium mamwe ese.
Zvemagetsi uye zvemakanika dhizaini muPadhuze & mbiri kuderedza
Yekusarudza nemazvo giya rinodzora kana rakagadzirirwa mota, Yakakwira torque ratings, giya ratios mukufambira mberi, akawanda ekumisikidza sarudzo, pamwechete.
IEC-yakajairwa motors ne brake, VFD nezvimwe.
Mutengi anogona kusarudza ese marudzi egehena misoro inokodzera neyese mota. Yakasiyana torque yemusanganiswa kubva kune mota negearbox., Kunyatsoendesa simba kubva kune mota kuenda kune zvinoshandiswa uye kushandisa kune akasiyana maindastiri, inclu muchina maturusi.
Tsvaga rondedzero ye Helical worm gearmotor s yakatevedzana
S akateerana helical-honye magiya magiya
Ongorora kurudyi kona, honye giya mota inogona kuiswa nyore nyore mune yakasimba kwazvo zvikumbiro. Magetsi magetsi kubva ku0.04 HP kusvika 157.37 HP. nematanho emagetsi ehonical / helical-honye, ​​saka anoshanda kupfuura akajairwa helical-honye magiya magiya.
Giya zvikamu pamwe chete nezvinodiwa motors
Simba reiyo helical-honye magiya zvikamu ndeavo. Zvakanyanya kushanda zvakanyanya pane yakajeka gonyeti zvikamu nekuda kwekubatana kwehonye-honye. Iyo linear simba kuendesa kunoita kuti iyo helical-honye magiya zvikamu kunyanya yakanyarara mune compact asi yakakwirira torque.
Pano Musangano uye Mirairo Yekushandisa
Ruramisa kusarudzwa kwechigadzirwa, Iko kutaurwa kubva kuSogears pamwe nezvinotaridzika pane nameplate. yakagadzirirwa motor kusarudza gayiridzo uye gearbox yekuchengetedza bhuku. gearbox katekisheni pdf.
Tsvaga rondedzero ye Helical bevel yakarongedzwa motors
Helical bevel yakarongedzwa motors ine yakakura mutoro kutakura masimba
Iyi ndiyo mhando yekona yekurudyi helical bevel yakagadzirirwa mota inova yakafanana chiyero chekusona helical bevel yakagadzirirwa mota mukatalog yayo, kubva kune iyo gearing mhando yakagadzirirwa mota.
Helical bevel gear motors inoona yakanyanya kunaka kunyanya
Iyo compact uye dhizaini yakagadziridzwa giya dzimba yeiyo helical bevel magiya anozvisiyanisa ivo pachavo nekugadzirwa machini pamativi ese. Helical, yakafanana shaft, bevel, helical honye uye honye yakagadzirirwa mota.
Helical-bevel gear zvikamu zvinopa huwandu hwakanyanya hwekunyanyisa kweanopfuura 90%
Iwo macompact uye akagadziridzwa dzimba dze helical bevel magiya anozvisiyanisa pachavo nekugadzirwa pamativi ese. Yakagadzirirwa Synchronous Servomotors neHelical-Bevel Gear Units.
Tsvaga ikodhi rekodhi yakafanana shaft yakarongedzwa motors
Tsvaga yako yakafanana-shaft giya-mota nyore
Akavakirwa motors kubva kuNord Drivesystems yakanakira kushandiswa mu intralogistics pamwe neakawandisa zvinhu zvinotakura uye muindasitiri yezvikafu. Iyo inopa yakasarudzika sarudzo yeParallel Shaft Geared Motors.
Parallel shaft inomiswa yakarongedzwa motors dzakagadzirwa neSimba Kuvaka
Parallel shaft gearmotors anowanikwa kubva muchitoro mune ese AC uye DC magadzirirwo. Shaft yakaiswa uye flange yakaiswa yakafanana nehelical gearmotors. Corporation inopa yakasarudzika sarudzo yeParallel Shaft Geared Motors.
Parallel uye kurudyi kona shaft giredhi rinodzora catalog
Yakananga maindasitiri chidimbu. Type. Vanowedzera, Parallel shaft giya anoderedza uye magemota. Helical yakafanana mugodhi giya injini kukura ari SEW. Parallel shaft gearmotors anowanikwa kubva mumatanda mune ese AC uye DC magadzirirwo.
Tsvaga rondedzero ye cycloidal gear minimers
Iyo yekutyaira Nheyo yePlanethi cycloidal pini giya rekudzora
Cycloid Dhiraivha yakasarudzika cycloid giya dhizaini ine mabhenefiti akakurisa pane ekumhanyisa anoderedza anoshandisa zvakajairika involute mazino magiya Dhiraivha inokwanisa kumira pakati nepakati kuvhunduka mutoro unosvika mazana mashanu muzana yekatalog yayo torque ratidziro.
Imwe yeainyanzvi nyanzvi cycloidal giya rekudzora vagadziri
WB akateedzana Micro Cycloidal Pinwheel Reducer Gearbox Gear mota: ine imwechete nhanho cyclo drive giya rinodzora, kaviri danho cycloidal giya rinodzora. China Cycloidal Gear Reducer katarogu
Cycloidal kumhanyisa kudzikisira inopa kwakanyanya kukwirira kunowanikwa chinopa
Nyanzvi mushanduro yemagetsi bhajeti yemitengo ine yepamusoro mhando giya. Iyo cycloidal disc dhizaini inobvumira izvo zvinoderedza zvikamu kuti zvishande mukutsetseka. Yakakura sarudzo ye zero-backlash robotic gearboxes, yakanyanya kunyatsoita servo gearboxes.
Tsvaga renzveri yeNMRV yemhonye gadziriso gear
Worm gear inogadzirisa uye Worm yakarongedzwa motors
Yakasanganiswa Worm Gear Reducer NMRV neNMRV simba rehonye giya rinodzora parizvino rinomiririra mhinduro yakakwenenzverwa kumusika zvinodiwa maererano nekugona uye kushanduka.
NMRV uye NMRVpower ghonye gadziriso gear
Iyo nyowani yeNMRVpower nhevedzano, inowanikwawo seyakabatana sarudzo yehelical / honye sarudzo, yakagadzirirwa kugadzirisa yakakwirira modularity. Worm giya anodzora, akasanganiswa uye neye pre-nhanho yekudzikisa yuniti.
Motovario NMRV uye NMRV SIMBA yehonye gadziriro yemagetsi
TNRV akateedzana honye magiya mayunitsi chitsva-chizvarwa chechigadzirwa chakagadzirwa nekambani yedu pahwaro hwekukwenenzvera WJ akateedzana zvigadzirwa. Iko kuita kwakapihwa mukatalog kunoenderana nekukwirisa chinzvimbo B3 kana zvakafanana.
Kune Mamwe Katalogi, Ndokumbira Kuti Utitorere